Shalay Jamie Vardy maantana Lukaku – Arsenal oo silama filaan ah ugu dhaw saxiixa weeraryahanka Everton Romelu Lukaku. | Haqabtire News
Shalay Jamie Vardy maantana Lukaku – Arsenal oo silama filaan ah ugu dhaw saxiixa weeraryahanka Everton Romelu Lukaku.
Gunners ayaa xaqiijisay in ay seegtay saxiixa Jamie Vardy, ka dib markii Arsene Wenger uu saxaafada maalin ka hor u sheegay in ciyaaryahanka uu sii joogi doono kooxdiisa Leicester City.
Merson, oo in ka badan 400 kulan u saftay kooxda ka dhisan waqooyiga London ee Arsenal, ayaa aaminsan in Lukaku uu yahay weeraryahanka kaga haboo Arsenal xiisaha ay u qabeen ninka katirsan Dawacooyinka,
Waxa uu u sheegay talkSPORT: “Waxaan qabaa inuu yahay mid kayara duwan, waxoogaa xoog ah ayuu leeyahay, waxa uu ku wanaagsan yahay afka hore, tasoo ka caawin karta Arsenal in ay ku guuleysato waxkasta.
“Waxaan arkay isagoo u safan Chelsea kana tagay madaama u wax sameyn ah ku yeelan waayay, haddana ma muuqato sabab uu ugu laabto Bules ayuu yiri Merson.
Lukaku ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Everton, ka dib markii uu dhaliyay 25 gool tartamada oo dhan xili ciyaareedkii hore, waxaana aad ugu dhawaa tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger.
xiddiga oo hadda kala qeyb galaya xulkiisa Belgium dhacdada Euro 2016, ayaa Wenger uu doonayaa inuu ka dhigto bedelka Jamie Vardy oo hami badan ka lahaayeen taageerayaasha Arsenal, lakiin wuxuu u muuqdaa mid sii joogi doona kooxdiisa.